ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဒာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဒာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၁)
ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဒာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၁)
Posted by ဂႏၶာရီ ၾဆာအုပ္ on Jul 13, 2012 in Photography | 31 comments
အင်း ဒီ ပို့စ်က တော့ ကျွန်ုပ် ဂန္ဒာရီဆြာအုပ်၏ ဒုတိယမျောက် ဖြစ်တော့သကိုးဗျ.. ပထမ ပို့စ်မှာဆြာဖြစ်သင်တန်းပို့ချပြီးသကာလ အက်ဗန့် ထက်မံ သင်ယူလိုသူများကိုတော့ သီးသန့် သင်တန်းများရှိပါဂျောင်း.. ဆြာမလေးတွေဆိုပါက အထူးသင်ရှယ်. ထူးထူးရှယ်. .ရေရေလည်လည်ရှယ်.. စသည်ဖြင့် အနီးကပ်စနစ် အမျိုးမျိုးဖြင့် မတတ်မချင်း သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း.. အိမ်ထောင်မရှိသူ ၂၅ နှစ်အောက် ..ရုပ်ရည် ချောမောလှပသူ ဖြစ်ပါက သင်တန်းကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း…. ဆြာလေးများ ဖြစ်ပါက အဝေးသင် ကိုယ်ဟာကိုယ်ကျင့်စနစ်ဖြင့် အထူး အမြန် သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း.. ကြေငြာ အပ်ပါသည်..
ခု ဒုတိယ ပို့စ်မှာတော့ ဆြာကိုယ်တိုင် သွားရောက်ခဲ့သော ဂန္ဒာရီခရီးစဉ်များမှ ဓာတ်သေ များကို ဖော်ပြပေးပါမယ်.. ဘယ်တုံးက ဓာတ်သေ တွေကို စပြီးပြရမလဲဆိုတော့ … အင်း..??? !!!@@@
“ ရေပေါ်မှာ အိမ်လေးတွေဆောက်မယ်.. ရေပေါ်မှာ အိမ်လေးတွေဆောက်မယ်..တောင်ပိုင်းရဲ့ရှမ်းပြည်နယ် …” သီချင်းလေးရဲ့ ဌာနီ အင်းလေးက နေစလိုက်ကြတာပေါ့နော်..
အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် ခန့်မှန်းခြေ ၄၄.၉ စတုရန်းမိုင်ခန့်ရှိပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် ၂၉၀ဝ မိုင်မှာတည်ရှိဒယ်ဒဲ့။ အင်းလေးကန်ဟာ တောင်ပေါ်အင်းအိုင်ကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါ ဒယ်ဒဲ့။ အဒီ ၁၀၄၄ က ပုဂံတွင် မြန်မာ့နန်းရိုးစခဲ့သော ပထမမြို့တည်နန်းတည်ဘုရင် အနော်ရထာ၏ မြစ်တော်ကြီး ဘုရင်အလောင်းစည်သူဟာ တိုင်းပြည်တနံတလျား ခရီးသွားခဲ့ရာမှာထားဝယ် သားတို့လည်း နောက်တော်ပါးကပါကြဒယ်ဒဲ့။ အင်းလေးကန်ရောက်တော့ ထားဝယ်သားတို့ကို အခြေချနေထိုင်ကြဖို့ အရပ်တစ်ခု သတ်မှတ်ပြုပေးတော်မူခဲ့ဒယ်ဒဲ့ ။ အနေအထားက ထားဝယ်သားတို့ နေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ (တင်္နသာရီ) ကမ်းရိုးတန်းအရပ်နှင့် ရေမြေအနေအထားများစွာတူလို့ပါဒဲ့။ အင်းသားတို့ကိုယ်၌က ဘုံပြောပုံဆိုပုံအသံအမူမှအစ ထားဝယ်သားတို့နဲ့ တူကြပါဒယ်ဒဲ့။
အရင်က မိုင်(၁၀၀)လောက် ရှည်လျားပေမယ့် ခုအခါ တောင်မြောက်အလျား (၉)မိုင် အကျယ် (၃.၅)မိုင်ခန့်သာ ရှိပါတော့ ဒယ်ဒဲ့။ အင်းလေးလို့ ခေါ်ဆိုရာမှာ အင်း (၄) ရွာကို အတိုကောက် ခေါ်ခြင်း ဖြစ်ပါ ဒယ်ဒဲ့။ နမ့်ပန်ရွာ၊ ဝမ်လုံ (ခေါ်) ရွာကြီးဗန်းပုံ၊ နောင်တော (ခေါ်) နောင်တောင်း၊ ဟိုင်းယ(ခေါ်) ဟဲယာရွာမ စတဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု (၄) ခုကို စုပေါင်း ခေါ်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါ ဒယ်ဒဲ့။ အဲဒီရွာကြီး (၄) ရွာကစပြီး တခြားရွာတွေ တစ်စတစ်စ တိုးပွားလာ ပါဒယ်ဒဲ့။ ဒယ်ဒဲ့…ဒယ်ဒဲ့…ဒယ်ဒဲ့။
ဒါကတော့ အင်းလေးအကြောင်း သိသမျှကူးချထားတာပေါ့ဂျာ.. အင်းလေး ဖောင်တော်ဦးဘုရားပွဲတော်ချိန် သွားတာ မို့လို့ ပွဲတော်ကပုံတွေ တင်လိုက်ပါ ဒယ်ဒဲ့
ဆရာ့ ဆရာ များ ဝေဖန်မှုကို ကြိုဆိုပါတယ်.. ကျွနှ်ပ်ကတော့ ၃ မိနစ်စာပဲ နားလည်တာကြောင့် အားပေး ဝေဖန်မှုကို စောင့်မျှော်နေပါကြောင်း…
အင်းတိန်လမ်းပေါ်က အလန်းလေး ၂ ယောက်
ခန္ဒီစ သည်းခံ ခြင်းတရား ဖြင့် ကွန်နက်ရှင်အား အစုတ်ပျက်သုံးပြီးသကာလ….တော်တော်တင်လိုက်ရတယ်.. မနက်၂း၄၅ တောင်ရှိသွားပါ ပကော..
ဤသို့ပြုရ ကုသလအား ရွားသူရွာသားများအား အမျှပေးဝေပါ၏ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မျှ ရကြပါစေ..
Landscape ရိုက်ရတဲ့ ခက်ခဲ မှုကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်ဗျာ။ ရောက်အောင် သွား ပြီးကာမှ ရာသီဥတု က ဖျက်ရင် .. စိတ်မောရတာကိုးဗျ။ အပေါ်ဆုံး ၂ ပုံ အတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ .. print ထုတ်လိုက်ရင် အပေါက်တွေ (ခပ်ကြီးကြီး) ပေါ်နေမှာကိုးဗျ…။ ဟဲဟာရွာက ပန်းဒေါင်မကြီး ပုံကတော့ ဓာတ်ပုံ ရိုက်တဲ့ သူတွေ စိတ်ကြိုက်ရတဲ့ အနေအထားပါပဲ.. သူ့ ပုံနဲ့ ဓာတ်ပုံအသင်း လပတ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဆုရဓာတ်ပုံတွေရှိပါတယ်။ အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင်တော့ မကြီးစိုး – စိုးမြန်မာ လက်ရာ ပါ။
ပဒေါင် ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သူတို့မကြိုက်ကြပါဘူး။ ဒုက္ခသည် လို့ ပြောတာနဲ့ အဓိပ္ပာယ် တူနေလို့ပါ။ သူတို့ လူမျိုးစု နံမည် ကတော့ “ကယန်း” လူမျိုးပါ။ ဒီတစ်ခေါက် ပြပွဲ ဝင်ပြပါဗျာနော့ … လက်ဆောင် လဲ ပေးချင်တာရယ် အပြင် မှာလဲ တွေ့ချင်တာရယ်ကြောင့်ပါ။
သည်ပိုစ့် လေး မှာ အဲ့အကြောင်းလေး ….။
အဲ .. ပုံတွေကြည့်ကောင်းလွန်းလို့ ချီးကျူးဖို့ တောင်မေ့တယ်၊ မိုက်ဒလယ် ဗျို့… ရှယ်လက်ရာ ရှင်ပဲဗျ ..။
ကလုလင်ကတော့လုပ်ရော့မယ်.. တူများကို ပဟေဠိလုပ်သွားပြီး.. ကလုလင်ကော ပါတယ်ထင်ပါ့ အဲဒီတုုံးက.. ချီးကျုးတဲ့ အတွက်ကျေးဂျုးပါဂျို့.. ကလုလင်လို လူမျိူး. ကချီးကျူးတာ ဂုဏ်ယူကြောင်းပါ..
ခေါင်းစဉ်စာသား.. “ဂန္ဒာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ” ကိုတော့ အကြိုက်ဆုံး…
ဟိုးအရင်က… ဓာတ်ပုံဆိုတာ.. ကမ်မစ်ကယ်(ဓာတ်)တွေကနေ..ဖလင် ဆေးကြောပုံဆောင်ခဲချပြီး.. ဖြစ်လာတာ..
0 1 ကနေဖြစ်လာတာ..
အင်း… ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ …??@@@####
တိဘူး… ချင်းခြားလိုက် ဦးမယ်..
ဒ့ါပုံဆြာကြီးတစ်ပါး တိုးလာပါပြီကော။ [:)]
သူများရိုက်ထားတာကြည့်ပြီး လက်သင်လား၊ ဆရာဖြစ်လား ဆိုတာတော့ မှန်းကြည့်တတ်တယ်။
(အိမ်ထောင်မရှိသူ ၂၅ နှစ်အောက် ..ရုပ်ရည် ချောမောလှပသူ ဖြစ်ပါက သင်တန်းကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း…. ဆြာလေးများ ဖြစ်ပါက အဝေးသင် ကိုယ်ဟာကိုယ်ကျင့်စနစ်ဖြင့် အထူး အမြန် သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း.. ကြေငြာ အပ်ပါသည်..)
သင်တန်းဆရာ ကြည့်ရတာ အသက်အရွယ် ကန့်သတ်ထားပုံရတယ်။
အသက်ကြီးသူများ လက်မခံပါလို့ မရေးရုံတမယ်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ [:-((]
အသက်ကြီးသူများကတော့ တရားလေးဘာလေးလုပ် ပေါ့နော် ဟိ
အားပေးသွားတယ် ဆြာ အုပ် ..
ဖိုတို ဒစ်စ်ခွစ်ရှင်းလေးများ ပြောပြ ပေးနိုင်မလားဗျ ာ
ပြောင်းကတော့ တစ်ပြောင်းဘဲ ရှိသဗျ.. ဟိ
” ကျွန်ုပ် ကတော့ ၃ မိနစ်စာပဲ နားလည်တာကြောင့် ”
သားသား ကိုလဲ အဲဒီ ၃ မိနစ်စာ လေးတွေ သင်ပေးနော် ။
ဂီဂီ ရေ ၊ ဂီဂီ အကြံပေးတဲ့ အတိုင်း ၊
D 5100 x 18-55 & 55-300 VR Twin Kit ဝယ်လိုက်ပြီ ။
ရောဂါသဲနေလို့ ၊ ချက်ချင်းရချင်လို့ ၊ On Line ကမဝယ်ပဲ ၊
$ 100 လောက်ပိုပေးပြီး ဆိုင်မှာ တမင် သွားဝယ်ပါတယ် ။
ဆိုင်ကလည်း နောက်အပါတ်မှ လာယူပါတဲ့ ။ စိတ်လေတယ် ။
16 GB, class 10 SD Card နှစ်ခု နှင့် Battery အပိုပါ ဝယ်လိုက်ပြီ ။
စုစုပေါင်း AU$ 1200 ကျတယ် ။
သူကြီးတော့ ဆာဗာလေးဘို့သာပြင်ပေရော့ ။
အဘ အတွေးအခေါ်လိုင်းကနေ ၊
ဓါတ်ပုံ လိုင်း ပြောင်းတော့မယ် ။
ခက်တာက ရိုက်စရာ စိုင် ကလည်းမရှိ ။ ဒုက္ခ ။
FR ရဲ့ ဒုက္ခကို ဖြေရှင်းပေးလိုက်မယ်။
Home Minister ကို မော်လဒယ်လုပ်ခိုင်းလိုက်ရင် အခက်အခဲ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
(ဒါမှ ရွာ့ယောင်းမကိုလည်း မြင်ဖူးသွားမှာ။ တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်)
ဟိုပိုစ့်မှာတုန်းက သုံးမိနစ်သင်တန်းလေးဖွင့်တော့ အခုပိုစ့်မှာလဲ ချက်နည်းပြုတ်နည်းလေး ပေးဦးမယ်ထင်ထားတာ..
(ဓါတ်ပုံပညာနဲ့ အဲသလိုနီးစပ်တာ. )
အရင်ပို့စ်မှာ ပေးထားတဲ့ သင်တန်းက တားတားတတ်တမျှအတုန်ဘဲ ဟီး..
ဒါနဲ့ဒီတခါဂန္ဒာရီ လှည့်ရင်တော့ အထုပ်လိုက်ထမ်းပီး..
တဂျားလူ မီဟုတ်ဘူးနော်..ဂျာအုပ်..အဲမွှားလို့ ဆြာအုပ် တဲ ဟေ့……………………………………………………….
အပေါ်ဆုံးပုံထဲမှာ ကိုရင်လေး မျက်မှောင်ကျုံ့နေတာ ကို သဘောကျအိ
ဟိုက်ရှာလပါတ်ရည်.. ကောင်းပါလေ့ တတ်နိုင်သလောက် အကျိုးဆောင်ရမယ် ဆိုရင်ဖြင့် သူရေးက
Orchestra Travel ထင်ပါတယ်
အချိန်ကာလက ၅ရက်၊ ၁ဝလ၊၂၀၁၁
မနက် ၁၀:၅၅ မိနစ်
ကယန်းမရေးးးး ဟိဟိ ဘလက် အန် ဝှိက်လေးနဲ့ ချစ်ချာရေး အာဟိဟိ
အဲဒီကယန်းမရေးကို ဂျစ်ရင် ခိုင်ထူးသီချင်းလိုရွှေလည်တိုင်ကို ဘယ်ရိုအနမ်းရေးပေးမှာရဲ ဟင်င်င်င်င်င်
လိုက်မပို့ပေးရင် သူကြီးတိုင်မှာ ဒါပဲ ဟီးးးးးးးးးး;)
ဖတ်ရတာ တစ်မျိုးပဲပေါ့။ ခရီးသွားကို အမြင်တစ်မျိုးဖြစ်စေတယ်။ ပုံလေးတွေက တကယ့်ကို ပညာရှင်ဓာတ်ပုံဆရာ ရိုက်ချက်တွေပဲ။ သုံးပုံသုံးနည်းနဲ့ ဘယ်လိုကင်မရာနဲ့ အသုံးပြုတာလည်းကိုပါ ပြောပြပေးပါလား။
ကျင်ညာချင်ဟုတ်ပေါင်ဂျာ.. ၃မိနစ်စာဘဲ တတ်ထားဂျောင်းပါ.. ဘယ်ရိုကင်မလာ လဲ ချိုဒေါ့ စနေနံ ကိုးနဝင်း ကင်မလာ ဖြစ်ကြောင်းပါဂျာ
စနေနံဖြစ်တဲ့ နီကွန် ကိုးနဝင်းဖြစ်တဲ့ 90 ပါဘုရား
ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၂၉၀ဝမိုင်လား ပေလား ခင်များးးးးးးးးးးး
ပင်လယ် ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၂၉၀ဝ ပေ ပါဂျာ .. ၂၉၀ဝမိုင်ဆိုရင် နတ်ပြည်ဖြစ်သွားမယ် ထင်ပါဒယ်
ဟုတ်သဗျို့ မိုင်လို့ရေးထားတာပဲ.. ဒါပေမယ့် ပေပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်နော် မိုင်တော့ မဖြစ်နိုင် ဟုတ်တယ်ဗျို့ ပေ.. မိုင်မဟုတ်
နို့ ချကားမချပ် ချစ်ပုံမြောက်ထဲက
အမဂျီးနဲ့ တိဒလားဟင်င်င် ..
ဟဲ့ဟဲ့ တောက်တဲ့မ ညည်းကြိုက်တာကြိုက်လို့ရတယ် ကိုပေနဲ့ နောင်ဂျိမ်ပလေးနေရမယ်နော်
(နာ့ ကယန်းမလေး မပါပီးရော) ဟိဟိ
အဖြူအမည်းဂျီးနဲ့ … မိုက်ပါဘူးအေ ..
ကယန်းမပုံရဲ့ အထက်က ကာလာလေးနဲ့ စိုစိုပြေပြေလေး ..
အဲဒါလေး ပြောင်းကြိုက်လိုက်ပါ့လား .. အဟိ ..
အဲ့ဒါက ဗိုက်ကလေးအတွက် သီးသန့်တဲ့ ဟိဟိ :grin: